Mubhadharo wekukurumidza kunonoka kukuvara - Law & More B.V.
Kubhadharira kukuvara kweanonoka kutiza
Kubva 2009, kana zvangoitika kunonoka kwendege, iwe semutyairi hausisiri kumira usina maoko. Chokwadi, mumutongo weSturgeon, Dare reJustice reEuropean Union rakawedzera chisungo cheairlines kubhadhara muripo. Kubva ipapo, vafambi vakakwanisa kubatsirwa nekubhadharwa kwete chete kana paine kudzimiswa, asi zvakare kana paine kunonoka kwendege. Dare ratonga kuti muzviitiko zvese izvi ndege chete dzine maradhi emaawa matatu kutsauka kubva pakurongwa kwekutanga. Marong iri mubvunzo inodarika nendege uye unosvika here kwauri kuenda kwaunopfuura anopfuura maawa matatu? Muchiitiko ichocho, iyo ndege inofanirwa kukubhadhara iwe nekuda kweanonoka kukuvara.
Nekudaro, kana iyo ndege ichigona kuratidza kuti haisi mhosva yekunonoka kwemubvunzo, nekudaro ichiratidza kuvapo mamiriro anoshamisa izvo zvaigona kunge zvisina kudzivirirwa, hazvisungirwe kubhadhara muripo wekunonoka kweanopfuura maawa matatu. Tichifunga nezve tsika yepamutemo, mamiriro acho haawanzo kushamisa. Izvi ndizvo chete zvakaitika kana zvasvika:
mamiriro ekunze akashata (akadai sedutu kana kuputika kwemoto kamwe kamwe)
kurohwa kusingazivikanwe (semuenzaniso nevashandi vepo muairport)
Dare reJustice harioni kuremara kwehunyanzvi panhandare sechiitiko chinogona kutorwa sechishamisa. Sekureva kwedare reDutch, kuramwa kwevashandi venhandare havasi kufukidzwa nemamiriro ezvinhu akadaro. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe semutakurwi unongopihwa kodzero yekuripwa.
Une kodzero here yekubhadhara uye hapana mamiriro akasarudzika?
Pakadaro, iyo ndege inofanirwa kubhadhara muripo kwauri. Naizvozvo, haufanire kubvuma kune imwe nzira inogona kuita, senge vouchaji, iyo yendege yaunopa kwauri. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, zvakadaro, iwe zvakare une mvumo yekutarisira uye / kana pekugara uye nendege inofanirwa kuita izvi.
Kuwanda kwekubhadharwa kunogona kazhinji kubva ku125, - kusvika mazana matanhatu, - euro pamutasvi, zvichienderana nehurefu hwekutiza uye nehurefu hwekunonoka. Kwekunonoka kwendege dzakapfupika kupfuura 600 km iwe unogona kuverenga pane 1500, - muripo weEuro. Kana zvine chekuita nendege pakati pe250 ne 1500 km, muripo we3500, - euro inogona kunzi yakanzwisisika. Kana iwe uchibhururuka kupfuura anopfuura 400 km, mubhadharo wako kweanopfuura maawa matatu ekunonoka unogona kusvika mazana matanhatu, - euro.
Pakupedzisira, maererano nemubhadharo uchangorondedzerwa, pane imwe mamiriro akakosha kwauri sewe munhu anenge achipfuura. Muchokwadi, iwe unongofanirwa kuve nemubhadharo wekunonoka kukuvara kana kunonoka kwako kutiza kuchidzika Mutemo weEuropean 261/2004. Izvi ndozvazvinoita kana kubhururuka kwako kuchimuka kubva kuEU nyika kana paunobhururuka uchienda kune imwe nyika mukati meEU ine kambani yendege yeEuropean.
Uri kusangana nekunonoka kwendege, iwe unoda kuziva kana iwe uine kodzero yekubhadhara muripo wakakonzerwa nekunonoka kana iwe uri kuronga kutora chero danho kupokana nendege? Ndokumbirawo ubate magweta pa Law & More. Magweta edu nyanzvi mumunda wekunonoka kukuvara uye vanofara kukupa iwe kuraira.
Next Migumisiro yekurambana kwemvumo yako yekugara »
pashure «Unogona kunyoresa kambani kune chaiyo hofisi kero?